निखिल र संचिताको क्रेज धरापमा परेको हो र ? - Sajha Entertainment
Home/अन्य no use/निखिल र संचिताको क्रेज धरापमा परेको हो र ?
निखिल र संचिताको क्रेज धरापमा परेको हो र ?
Sajha Entertainment Send an email १ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०९:३८
योगेश घिमिरेले राधा फिल्ममा अभिनेत्री संचिता लुइटेललाई मुख्य भूमिकामा राखेका थिए । यो फिल्मले व्यापार पनि ठिकठाक नै गरेको हो । संचिताको अभिनयलाई पनि दर्शकले मन पराएका हुन् । तर, राधा २ बनाउन लाग्दा संचितालाई योगेशले लिन आवश्यक नठानेको देखियो । योगेश पनि बलेको आगो ताप्न तिरै लागे । उनले प्रियंका कार्कीलाई राधा बनाउने भएका छन् ।
प्रियंकाले संचितालाई विस्थापित गर्दा संचिताको क्रेज सकिएको प्रतिक्रिया फिल्मी बजारमा सुनिन थालिएको छ । संचिताको साना ब्यानरका एक दुई फिल्म रिलिज हुन बाँकी छन्, अरु केही छैन ।
संचिताको मात्र होइन, अभिनेता निखिल उप्रेती क्रेज पनि सकिएको चर्चा सुरु भएको छ । आफूले बनाउन लागेको कमिटमेन्ट फिल्म निखिलले पुरा गर्न सकेका छैनन् । अरु, निर्माताले उनलाई फिल्ममा लिन चाहेका छैनन् । द्वन्द बाहेक अरु फिल्म गर्न नसक्दा निखिललाई खाली हात बस्नुपरेको छ ।
अब, निखिल र संचिताले नै एउटै फिल्ममा सँगै काम गरे के होला ?